China Plastic chigadzirwa dhizaini Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Chipurasitiki chigadzirwa dhizaini kutsanangura chimiro chechigadzirwa uye chimiro, zviyero uye kurongeka, chimiro chemhando. Iyo yakavakirwa pane izvo zvigadzirwa zvinodiwa uye hunhu hwezvinhu zvinoshandiswa. Dhizaini dhizaini yezvigadzirwa zvepurasitiki zvinonongedza zvakananga kugona kwayo uye mutengo wekugadzira.
Kugadzirwa kwepurasitiki chigadzirwa kunosanganisira akasiyana siyana maficha. Mukuita, akasiyana maumbirwo uye echimiro mafomati achasangana. Ruzivo irworwo rwunosanganisira: kusarudzwa kwezvinhu, hukama pakati pechiumbwa uye chigadzirwa, kutadza kutaridzika kunokonzerwa nekuumbwa kwejekiseni, kufambidzana pakati pemahombekombe, kubatana pakati pemahombekombe uye dhizaini yakagadzirirwa rimwe basa, nezvimwe.
Mestech kambani inopa vatengi vane epurasitiki zvikamu dhizaini uye jekiseni kuumbwa kwemagetsi zvigadzirwa zvemagetsi, maspika emagetsi, smart imba, mwenje mwenje, Kitchenware uye tafura, kurapwa, makomputa, mota zvigadzirwa zvemberi. Izvi zvikamu zvine akasiyana maumbirwo uye hukuru, kusanganisira:
(1), Plastic dzimba
(2), Plastic puranga
(3), Transparent chikamu
(4), Two zvinhu Kuumbwa chikamu
(5), Waterproof mapurasitiki zvikamu
(6), Gear, honye giya
(7), Thread uye mutobvu sikuruwa
(8), Mutete mativi emadziro
(9), Set doro zvikamu
(10), Elastomer zvikamu
Double jekiseni zvikamu
Mushure mekudhirowa dhizaini yezvikamu zvepurasitiki zvakanyatso zadzikiswa, chakuvhuvhu kuyerera kuongorora uye ruoko bhodhi ongororo zvinowanzodiwa. Kugara unoshandura nekuvandudza dhizaini, uye pakupedzisira woisa mukugadzirwa kweforoma uye zvikamu zvekugadzira.
Mestech inopa vatengi zvikamu zvepurasitiki dhizaini, kugadzira chakuvhuvhu uye jekiseni kuumbwa kwekugadzira. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, ndapota taura nesu uye isu tichakupa iwe neyedu sevhisi sevhisi.
Pashure: Dhizaini yekushandisa pamba
Zvadaro: Simbi chikamu dhizaini